ओलीको नयाँ मिर्गौलाले काम गर्न थालेपछी होस उडेकाहरू… « dainiki
३ मंसिर २०७७, बुधबार १४:५२
कुरा अहिले पहिलेको हो। उहिले (अलि पहिले) एउटा गाउँ रहेछ। उक्त गाउँमा एउटा घर रहेछ सो घरमा आमा र छोरी मात्र बस्ने रहेछन्। घरको मुलीको पहिले नै मृत्यु भएको रहेछ। छोरी लक्का जवान अनि आमा बुढी रहेछन् । दिनहरु क्रमशः वितिरहेका थिए । खेतीपातीको मौसम/समय/बेला सुरु भयो । अरु गाउँलेहरु खेतीपातीको काम सुरु गरे, केहिले सक्न आटेछन् । उक्त घरका अहिलेसम्म काम सुरु नगरेपछी छिमेकीले उनीहरू सोधेछन् । यसपालि खेतीपाती नगर्ने ? छोरीले जवाफ दिइछन् :- “आमा बुढी छन्, डाँडा माथिको जुन/घाम भैसकिन्, कतिबेला अस्ताउछिन् पत्तो छैन्, म तरुनी छु, कसै न कसैले लगिहाल्छ। किन दु:ख गरेर खेतीपाती गर्नु”? यस्तो जवाफ सुनेपछि गाउँलेहरु (छिमेकीहरु) मौन हुँदै आ-आफ्नो घर तर्फ लागे।
प्रकाशित मिति: ३ मंसिर २०७७, बुधबार १४:५२